Madaxtooyada oo War kasoo saartay Ujeedka Safarka Farmaajo ku tagay Asmara (Sawirro) | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Madaxtooyada oo War kasoo saartay Ujeedka Safarka Farmaajo ku tagay Asmara (Sawirro)
Madaxtooyada oo War kasoo saartay Ujeedka Safarka Farmaajo ku tagay Asmara (Sawirro)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Asmara ee xarunta dalka Ereteriya, halkaas oo ay uga bilaabmatay booqasho labo maalmood ah.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa qaabilaad iyo soo dhaweyn diirran ugu sameeyey Garoonka Diyaaradaha ee Asmara Madaxweynaha dalkaas Mudane Isaias Afwerki iyo xubno ka tirsan Goleyaasha Dowladda Ereteriya.
Labada Madaxweyne ayaa ka wadahadlaya hannaanka kor loogu qaadi karo iskaashiga siyaasadeed, dhaqaale iyo bulsho ee labada dal, si loo dardargeliyo qorsheyaasha ku qotoma ganacsiga, maalgashiga iyo isku xirnaanta bulshada Gobolka.
Madaxweynaha dalka Ereteriya Mudane Isaias Afwerki ayaa muujiyey dareenkiisa farxadeed ee booqashada Madaxweynaha iyo wafdigiisa, waxa uuna tilmaamay in booqashadani ay qeyb ka tahay dadaallada wadajirka ah ee labada dowladood ay ku bixinayaan kor u qaadidda xiriirka iyo iskaashiga oo mudnaan u leh labada dal.
Dowladda Soomaaliya waxaa ka go’an adkeynta xiriirka iskaashi iyo dhaqaale ee dalalka gobolka, taas oo xoojineysa in dalkeennu uu door muhiim ah ka qaato geeddi socodka horumarineed ee ay hiigsanayaan dalalka gobolku.
Previous articleTaageerayaasha Donald Trump oo isugu soo baxay banaanka isbitaalka milatariga ee lagu dabiibayayo
Next articleWar deg deg ah Rasaas Culus oo ka dhaceysa xera ciidan oo ku taalo magaalada Muqdisho
Somalia, Kenya ‘close to agreement
Wasiir Fiiqi oo ka ahor Yinid Amar ka ayimid Dowlada Federaalka
Rooble oo booqday jidkii u xirnaa safaaradda QATAR oo dib loo...